ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အလွမ်းပြေ ရိုက်ချက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အလွမ်းပြေ ရိုက်ချက်များ
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အလွမ်းပြေ ရိုက်ချက်များ
Posted by black chaw on Oct 14, 2011 in News, Photography | 41 comments
ဘလက်ချော ရဲ့ အမှတ်တမဲ့ ရိုက်ချက်များ
ကိုပေါက်၊ ကိုစိန်သော့ နှင့် ကိုချို တို့၏ ရိုက်ချက်များကို အားကျပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်းထဲသို့ ဒီနေ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ထွက်ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်သုံးကင်မရာလေးနှင့် အပျော်တမ်းရိုက်ချက်များကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အလွမ်းပြေ အဖြစ် တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
ကျောင်းသားဟောင်းကြီးများရော၊ ဒီကျောင်းရဲ့ အရိပ်မှာ မခိုနားဘူးခဲ့သူများရော ခံစားမှု တစ်ခုခုရရှိသည် ဆိုလျှင် ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါသည် ခင်ဗျား။
စစ်ကိုင်းလမ်းက စောင့်နေမယ် သူမှာလို့.....
သစ်ပုတ်ပင်အို ရဲ့ ဝေဒနာ
ရီးဇားလေးကိုခေါ်ပြီး ဦးချစ် လဘက်ရည်သွားသောက်မယ်
အင်းလျားကန်ကို နှစ်ယောက်သား ခဲလုံးလေးတွေ သွားပေါက်မယ်။
ဂျဒ်စင် နောက်ကျောကို စစ်ကိုင်းလမ်း ဘက်မှ မြင်ကွင်း
မိန်းမလှကျွန်း သို့မဟုတ် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
အင်းလျားအဆောင်သူလေးတွေ အခုတော့ ဘွားတော်ကြီးတွေပေါ့။
ရတနာသူ လေးတွေနေခဲ့တဲ့ ရတနာဆောင်
မောင့်သီရိမေ ဆိုပြီး သီချင်းလုပ်ဆိုခဲ့ရတဲ့ သီရိဆောင် အခုတော့.............။
စီးပွားရေးက အပျိုဟိုင်းကြီးတွေနေခဲ့တဲ့ မာလာဆောင်၊ အခုတော့.....။
ပင်းယသား အကောင်းစားလေးများရဲ့ ပင်းယဆောင်။
စစ်ကိုင်းသားတွေ နေတဲ့ အဆောင်။
တတ်နိုင်သလောက် ရနိုင်သလောက် အလွမ်းပြေအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေရာလေးမှာ ဒီနေ့ကျောင်းသားလေးတွေ စာပြန်သင်သင့် မသင်သင့် ဆိုတာကို တော့
သူကြီးရေ စစ်တမ်းကောက်ပေးပါလို့ ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက် တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ။
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါ၏ နောက်ဆုံးဘွဲ့ရပြီး ဓတ်ပုံလေးတောင် မရိုက်လိုက်ရဘူးဗျာ အမြန်ဆုံးနီးနဲ့ ပုဂံလုံးစီးပြီ အိုဗာစီး အောက်လာတာ
ခုထိမောင်ကြီးမပြန်နိုင်တယ် ဇတ်ကားရိုက်နေရတယ် လွမ်းမိပါ၏
ရွှေဘိုဆောင်နဲ့ ဖင်ချင်းပေါက် ထမင်းစားအဆောင်တူတူ ဒဂုံဆောင် ကိုသတိရတယ်။
ပြီးတော့ ပဲခူးဆောင်ပေါ့။ အမှတ်ရစရာလေး တွေ ကျေးဇူးပါနော် ကိုဘလက်ချောရေ။
အထူးသတိရစရာကတော့ “ကျောပေါက်ကြီး” ပေါ့ဗျာ။ ကြုံရင်ရေးပါအုန်းမယ်။(^^)
အဓိပတိလမ်းဘေးက တရုပ်စံကားပင်လေးတွေက အရွက်မရှိတော့ သလိုပဲနော်။ သိပ္ပံကင်တန်းမှာ အမြဲစားခဲ့တဲ့ စိုးမြင့်ကြော်တပွဲနဲ့ သံပုရာရည်လည်း အခွင့်ရရင် သောက်ချင်သေးတယ်။
ဘလက်ကြီးရဲ့ ပုံတွေကို မြင်ပြီးတော့
ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ သီချင်းလေး ကို သတိရတယ်ဗျာ
“ ဒီအချိန်ကျောင်းတော်ကြီး ရဲ့ အလယ်မှာ…
အလွမ်းရယ်မပြေဘူး ကျောင်းသားဘဝ ”
မိန်းတင်မကဘူး။ အာစီတူးပါ ရိုက်လာခဲ့တာ။
ဒဂုံဆောင်ကို ကျွန်တော်ရိုက်လာခဲ့တယ်။ ကိုသစ်မင်းရေ။
ဆိုင်းဘုတ်မရှိ ဘာမရှိနဲ့မို့ မတင်လိုက်တော့တာ။ ပဲခူးဆောင်တော့ မရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူး။
ဒီကျောင်းကြီးမှာ ဒီခေတ်ကလေးတွေ စာပြန်သင်သင့် မသင့် ဆိုတာလေး
ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာ ကျောင်းသားတွေ စာပြန်သင်သင့်တာပေါ့ …
အထူးစပါယ်ရှယ်ဘာသာရပ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် … မာစတာတန်းလိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ … တစ်ခုခုတော့ လုပ်သင့်ပါတယ် … အခုတော့ နှမြောစရာ … ကြာရင် ရှေးဟောင်းပြတိုက်ဖြစ်တော့မယ် …
ခေါင်းစဉ်က သတ်ပုံလေး ပြင်လိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်နော် …. အလွှမ်းပြေဖြစ်နေလို့ … အလွမ်းပြေဖြစ်ရမှာလေ …
မမ မအားဘူးထင်လို့ ကိုယ်စား ပြောပေးလိုက်တယ်နော် ….
အင်းးးးးးးးး ကိုယ်တိုင် ပတ်သက်ခဲ့ရသူတွေတော့ ဘယ်လိုရှိမယ်မသိ။ မပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့လူတောင် ကြည့်ရင်း တမျိုးကြီး ခံစားရတယ်။
သဂျီးရေ- blackchaw ရဲ့ အမေးလေးကို vote လုပ်ပေးရင်ကောင်းမယ်။ ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးလိုက်တယ်။
ဝေဝေရေ- မမ မအားတာ မဟုတ်ပါ။ အမှားကို မသိလိုက်တာပါ။
မဝေ ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး လွမ်း နေဆဲ ကို ဘလက်ချောရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကြောင့် ငုတ်တုတ် ထိုင်နေရပြီ….
ကျွန်တော်က RC 1 , RC 2, RC3နဲ့ Main ထဲမှာ ပါကျောင်းတက်ဘူးတာ သူများတွေထက်လွမ်းစရာပို ပေါတယ်…..
ပုံတွေကြည့် ပြီး တက္ကသိုလ် နဲ့ ပါတ်သတ် တဲ့ သီချင်းတွေ ခေါင်းထဲ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရောက်လာ တွေးနေမိတာ အများကြီးပဲ… အားလုံးထဲက အကြိုက်ဆုံးကတော့ သျှိုင်း အောင် ရဲ့ ကန့်ကော်တောမှလွမ်းချင်းရှည် ဆိုတဲ့သီချင်းပဲ နှောင်းလူတွေ ကြားဘူးနိုင်ကြပေမယ့် လူငယ်တွေတော့ သိကြတော့မှာ မဟုတ်ဘူး…
အဆောင်တွေပုံ ကြည့် ပြီး တစ်ခါက မန္တလေး ရေကြည် သူ အီကို စတက်နဲ့
ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းလာတက်ခဲ့တဲ့ နှင်းဆီဆောင် ၀မ်းတူးဝမ်းက အဆောင်သူလေး တစ်ယောက်ဆီ အလွမ်းရထား နောက်ပြန်မောင်း နေမိတော့တယ်….ဒီစာတွေ့ရင် သူရောလွမ်းနေလေမလားးးးးးးး..
အဘဆွေ သတိရနေတာ မင်မယ်ကြီးမ မဟုတ်လား …
တညနေ လုံး ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုနေမိတယ်ဗျာ….
မညာကြေးဆိုရင် သဂျီးကိုယ်တိုင်လည်း အတိတ်လေးတွေ ရှိနေမှာပါ နော်….
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဗျာ။ နေ့လယ်က ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်တော့
၀မ်းနည်းစရာတစ်ခုက နှင်းဆီဆောင်ရှေ့မှာ အတွဲတွေရဲ့
ကားလေးတွေ ခိုအောင်းဘို့ ဂျက်ကာ အပီအပြင်ဖြစ်နေပြီဗျာ။
ဆရာဆွေ။ ကျွန်တော်လည်း အီကိုနဲ့ ပြီးတာပါ။
၁၉၉၄ မှာ ကျောင်းပြီးပါတယ်။ ဆရာဆွေ့ ကောင်မလေးက
ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကလဲ။ ဆရာဆွေက အီကိုထိ ပေါက်ရောက်တယ်ဆိုတော့
ကိုဘလက်ချော ရေ ကျွန်တော်က တစ်တန်းကို ၂နှစ်နေခဲ့ပါတယ် ကယ်မစ်စတွီ မေဂျာပါ ။အဲဒီနှစ် ၁၉၉၀- ၉၁ ၀န်းကျင်လောက်ပါပဲ နှင်းဆီ သူနဲ့တွေ့တာသူ ကျောင်းပြီးတော့ ၁၉၉၅ ထင်တယ် ဓါတ်ပုံလေးတင်ပေးပါဦး အလွမ်းပြေ…
ဆော် မကြည်ပါဘုးဆရာ ရယ် ခုထိ အကျဉ်းတန် ဧ။် အထီးကျန် ဇာတ်လမ်းကို ဆင်နွဲနေရပါတယ် … ကံကောင်းလို့ ကောက်ရခဲ့ဘူးတာပါ..ကံမှောက်တော့ပြန်ပျောက်သွားတယ်….
ပြောရင်းလွမ်းလာပြီ ဂျက်ဒယ်နီရယ် သွားယူဦးမယ်…သောက်စရာဇာတ်လမ်းရှာနေတာနဲ့ အတော်ပဲ။
အဲ့ဒါကြီးမဟုတ်ပါဘူးမဝေရယ် ….တူလေးကနောက်တစ်ယောက်ပါ….(အခုတော့သူကြီးဖြစ်နေလောက်ပြီ သားတစ်ရာ မြေးတစ်ဖြာနဲ့)
လွှမ်းကို လွမ်းပေးပါ။ သူကြီးရယ်။
ဒီပို့စ်အတွက် ပွိုင့်တွေ နှုတ်ရင်လည်းနှုတ်လိုက်ပါ။
ကျောင်းဆိုမှတော့ စာသင်သင့်တာပေါ့ကွယ်…။ အားမငယ်ပါနဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရယ်…။ မင်းနဲ့ ဘ၀တူ မန္တလေး တက္ကသိုလ် ဟာလဲ နွားကျောင်းခံနေရရှာလေရဲ့…။ တစ်နေ့နေ့ပေါ့ မေရယ်……ပေါ့ကွာ…။ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ကျောင်းသား တွေ စာပြန်သင်တဲ့ တစ်နေ့ ရောက်လာဦးမှာပါ…။ အဲဒိနေ့ကျမှ………… အဲဒိကျောင်းထဲ ပြန်ဝင်မယ်………
အယ်..ဂျပ်ဆင်ကြီးက ဆေးတွေသုတ်ပြီး သစ်နေပါလား…
ကျောင်းဆိုတာ စာသင်ဖို့ပါ၊ပိတ်ထားဖို့မဟုတ်ပါ၊သဂျီးက vote လုပ်လုပ်မလုပ်လုပ် ဇွတ်မဲပေးလိုက်ပါသည်၊
တီချာတို့ နေခဲ့တာက နဝဒေးဆောင်နဲ့ သမိုင်းထဲက ဂန္ဓမာဆောင်တွေမှာ။ ဒါနဲ့ ကိုချေုာရဲ့  ပုံတွေထဲက
လွမ်းစရာ လိုက်ရှာကြည့်တော့ အော် ၁၉၇၀ ငွေရတုတုန်းက အဓိပတိလမ်းမ ပေါ်မှာ လျှောက်ဖူးခဲ့ပါသည်။
RC ထဲမှာ Inter-Institutes ပင်ပေါင်လာပြိုင်ဖူးတာပဲ။ ၁၉၇၂ မှာ ဘွဲ့နှင်းသဘင် လာတက်ဖူးတဲ့ Convocation
ံ့Hall ကြီးကလည်းလွမ်းစရာပါပဲ။ တိုင်းရင်းသားသူငယ်ချင်းလေးတွေနဲ့ Judson ကို Sunday School လာဖူးတာ
လည်း လွမ်းရတဲ့ အထဲပါနေတာပါလား။ ဆရာ လယ်တွင်းသားစောချစ်တို့ လွမ်းတာလောက်တော့ ဒေါ်TNU တို့ အကြောတောင်ပေးလိုက်ချင်တယ်။ ဒါတောင် ချစ်သူတို့လျှောက်သောလမ်းလေးကို တစ်ယောက်တည်း
လွမ်းချင်လို့ မပြောပြတာနော်။ မောင်ရင့် ပုံထဲမှာလည်းမပါလို့။ ပါလာရင် ကျုပ်ချုံးမွဲချငိုပြီတော့။
RU Rangoon University အမည်နဲ့ ၁၉၂၀ က အင်္ဂလိပ်ကတည်ထောင်ပေးသွားတာ..။
မြန်မာပြည်ရဲ့.. သက်တန်းအကြာဆုံး တက္ကသိုလ်ပေါ့..။
တက္ကသိုလ်တခုရဲ့ တန်ဖိုးက သက်တန်းပေါ်အများကြီး တည်မှီတယ်..။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကို ပြန်ပြီး ရှင်သန်အောင်လုပ်ရင်း.. ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီအောင် လုပ်သင့်တာပေါ့..။ အဲဒီကထွက်တဲ့ ကျောင်းတော်သားတွေ ကမ္ဘာတန်းမှာ အများကြီးရှိနေတာပဲ..။ အကူအညီတွေပြန်ခေါ်ပြီး.. အမိတက္ကသိုလ်အတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ခိုင်းရမှာပါ..။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့တူတူ ၁၉၂၀မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့.. ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုလည်း ပြန်လုပ်ကြရမှာပါ..။
မင်းကိုနိုင်အပါအ၀င်သမဂ္ဂ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း/သစ်တွေနဲ့.. ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲ သမဂ္ဂအဆောက်အဦ အုပ်မြစ်ချ..ပြန်ဆောက်သင့်တယ်..။ အုပ်မြစ်ချ မော်ကွန်းမှာ.. သူတို့အမည်တွေထည့်သင့်တယ်..။ ဒါဆို အားလုံးကျေနပ်ပျော်ရွှင်ကြမယ် ထင်မိပါတယ်..။
… ပြီးခဲ့သမျှတွေ သင်ပုန်းချေပြီး တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတော်သစ်ဆီ သွားဖို့သင့်ပါပြီ..။
“ရာသီဥတု သာယာတဲ့တနေ့ကျရင်.. ပျော်ပျော်ပါးပါး အုပ်မြစ်ချကြရအောင်”.တဲ့
… ရာသီဥတုသာယာအောင် ..လုပ်ယူကြပါစို့..။
ဒါကို ..နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ သိအောင်..poll လုပ်ပါမယ်..
ပုံတွေပြလို့သာ ကြည့်လိုက်ပါတယ် ကျွန်မတို့အတွက်တော့ … ဘွဲ့ ယူတုန်းကသာ မဖြစ်မနေရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာမို့ လွမ်းစိတ်တော့မဖြစ်မိဘူးလေ … ။ ကျွန်မတို့ တက်ခဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ … ဖုန်ထူ ၊နေပူပြီး … လွင်တီးခေါင်ပြင်မှာ …
တော်ဝင်လမ်းအ၀င်ကျော်ကျော်နားက သစ်ပင်ကြီး(ကုက္ကိုပင်လားမသိ)ကိုရော သတိရသေးလား
ဖုန်ထူထူကားကွင်းကြီးနဲ့ နွေရာသီဆို လေပူတွေကတိုက် အေးမြတဲ့အရိပ်ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာမဲ့နေခိုက် (အယ်…အက်စစ်သီချင်းနဲ့မှားတွားဘီ )
ထမင်းစားချိန်ပဲ ကင်တင်းထိုင်ရ၊ ကျန်အချိန်စာသင်ခန်းအပြင်မထွက်ရ၊ အပြင်မှဆရာမတွေ ကင်းလှည့်ကြ၊ ဟွင့်ဟွင့်
ကျောင်းတက်ပျင်းလွန်းလို့ .. ကျောင်းနဲ့ ပတ်သတ်တာ .. ဘာကိုမှ သတိမရချင်တော့ပါဘူး ပန်ပန်ရေ … တကယ်ပါပဲ ကျောင်းတက်တုန်းကဆို . ၀ဋ်ခံရသလိုတောင် တွေးမိပါတယ် … ။ နွေကပူ ၊ ဖုံကထူး .. လူဦးရေက များများ သောက်သုံးရေက မကြည် … ၀ယ်သောက်ရတာက ရေသန့် ဗူး … အိမ်စောစောပြန်ဖို့ ကားစီးမလား ထီး ၊ဖြူဖိနပ်ပါးအောင် လမ်းလျှောက်ရတယ် … တကယ့်ကို ကျောင်းတတ်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ နှမျောတယ် .. ။
မတက်ဖူးပေမဲ့ အင်းလျားလမ်းလေးကိုတော့ သူနဲ့ တွဲလျှောက်ချင်လိုက်တာ ကိုပေ လိုက်ပို့ပေးပါလား
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲတော့ ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မစုံဘူးနော်။ ရိုက်လာတာတွေက ဂျပ်ဆင်အောက်က ချစ်သူလမ်းကြားလေးလည်း မပါသလို စစ်ကိုင်းလမ်းခွဲကနေ ၀င်ရင် ULB ဆောင်ကို ရောက်သလို ဆရာများ နားနေဆောင်တွေလည်း ရှိသေးတယ်လေ။ နောက် စစ်ကိုင်းလမ်းက ကန်တင်းလေးတွေ ခုလက်ရှိမှာ ဒီလိုမာသင်တန်းတွေရှိနေတော့ အရမ်းစည်တယ်လေ။ နောက် ဦးချစ်ဘက်က Law သင်တန်းတွေလည်း ရှိတယ်။ နောက် နာမည်ကြီး RC ဆောင်လည်း ပြပါဦးရှင့်။
ဆရာချောတို့လုဎ်ပုံ က ကျနော်တို့ လုဎ်တာထက်ပီပြင်တယ် ကျနော်တို့က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲ စွဲဆောင်လို့ရမယ် ခင်ဗျားကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အပြီးတိပ်းပိုက်လိုက်တလို ခံစားမိပါ၏ ပြောရင်းသူငယ်ချင်းရောင်းရင်း များကိုလဲ တမ်းတလွမ်းစွတ်မိပါ၏(မိန်းကလေးများကိုအထူး) direct hit pel
ကျွန်တော်ကအသက်ငယ်ပေမယ့် IT သုံးလတက်ဖူးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုကိုယ့်
Dear akswe, blackchaw & manawphyulay,
ဒါဆို အဘဆွေ အဘဆွေ နှင့်ခေါ်နေတာ ကျွန်တော်နှင့် သိပ်မကွာဘူးပေါ့ ။
ကျွန်တော်တို့ Same Batch တွေက ၈၈ အရေးအခင်းဖြစ်တော့ 4th year / နောက်ဆုံးနှစ်တွေ ။
Black Chaw ရေ
ကျွန်တော်တို့ ခေတ်က ဦးချစ် ဆိုင်က အဲဒီနေရာမှာ မဟုတ်ဘူး ။
ပြည်လမ်းကနေတောင် ဝင်တဲ့အပေါက်ရှိတယ် ။
RC ( recreation Center ) ဆိုတာ Label မတပ်ထားတဲ့
“စစ်ကိုင်းသားတွေ နေတဲ့ အဆောင်” ပုံ နှင့် “တောင်ငူဆောင်” ပုံ ကြားကပုံပဲ ။
Foreign Resident ကြီးရေ။
ကျွန်တော်က ခုဖွင့်ထားတဲ့ တောင်ငူဆောင်ရှေ့နားက ဦးချစ်ဆိုင်ကို ရိုက်ထားတာပါ။
ဟိုးတုန်းက ဦးချစ်ကို ကျွန်တော်တို့ မမီခဲ့ဘူးလေ။ တကယ်မထိုင်ခဲ့ဘူးပါဘူး။
ကိုင်ဇာက သီချင်းထဲထည့်ဆိုတော့ ငယ်ငယ်တည်းက သိနေခဲ့တာပါ။
ပြောပြပေးတာကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်က ၈၈ မှာမှ ၁၀ တန်းအောင်တာဆိုတော့
ဒီရက်ထဲပဲ.. အောက်က.. သတင်းဖတ်မိတာမို့..
စိုးရိမ်မိတယ်… တက္ကသီလာ မြကျွန်းသာရယ်…။
ကျွန်တော်ကတော့ မတက်ခဲ့ရပေမယ့် တက်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက် လွမ်းပါသဗျာ……..
လွမ်းစရာကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်မြေတကြောမှာ . . . လေးနှစ်ကြာ. . .အိပ်မက်ရှည် . . . မက်ခဲ့တယ်လေ။
ကျွန်တော်ကတော့ လေးနှစ်မကပဲ ကလေးဘ၀ထဲက RC2နဲ့ အင်းယားကန်ထဲမှာ ရေကူးရင်း ဆော့လာခဲ့တော့တောင်ပြန်သွားချင်လာပြီ။
သံတိုင်တွေမကာခင်တုန်းက ကားလမ်းဘေးက ဘူးသီးကြော်ဆိုင်နဲ့ အော်ကွေ့ကျီ ဆိုင်လေးတွေကိုလည်းလွမ်းတယ်။
ပုံတွေကြည့်ပြီးလွမ်းပါတယ်။ မနှစ်ကရွာပြန်တုန်းက အင်းယားရောက်ဖြစ်တယ်။ အင်းယားလည်းတော်တော်လှနေတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အလွမ်းပြေကန်ဘောင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့သေးတယ်။ တကယ်ဘဲမျိုးဆက်သစ်တွေကိုအဲဒီမှာကျောင်းတက်စေသင့်တယ်။ ကိုယ်တွေပျော်ခဲ့သလို သူတို့လေးတွေကိုလည်းပျော်စေချင်တယ်။
တက္ကသိုလ်တက်ရတော့ နေပူပူဖုန်ထူတူနဲ့ သွားလာခဲ့ရတယ်
ကျောင်းအပြန်မှာ ကျောင်းသူနဲ့မတူဘဲ အလုပ်ကြမ်းလုပ်လာသူနဲ့ တူသွားတယ် (သူများတွေလိုလည်း ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့လည်း ကျောင်းမတက်နိုင်ဘူး)
ဓါတ်ပုံတွေရိုက်တော့ အဖေနဲ့အမေက “ဒီဟာက ဂျပ်စင်ပေ့ါသမီးရဲ့၊ ဒီနားလေး ဓါတ်ပုံရိုက်ဦး၊ ဒီဟာသစ်ပုတ်ပင်ကြီးလေ၊ ခုတော့သူ့ကိုခြံခတ်လိုက်ပြီ၊ ဒီဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကြီးကို အပြင်ကဆေးသုတ်လို့မရဘူး၊ အတွင်းပိုင်းပဲ ပြင်ဆင်ထားမယ်ထင်ပါရဲ့”
ပြောသာပြောရ၊ အဖေနဲ့အမေလည်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ရတယ်တော့မဟုတ် (အဖေက ချောက်က သခင်ဖိုးလှကြီးကျောင်းက ဂျီတီအိုင်တက်ပြီး လေကြောင်းမှာအလုပ်လုပ်ရင်း ဖစ်စစ်အဝေးသင်၊ အမေက မန်းလေးမှာ အီကို)
နို့ပေသည့် သူတို့က နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိသေးသည်
ကျွန်မတို့မှာတော့ ၀တ္ထုဖတ်ပြီး စာထဲကပဲ ခံစားနေရသည်
ဦးချောရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့ ဘာလွမ်းမှန်းမသိ ငိုချင်လာသည်
ကိုယ်တိုင်မတက်ခဲ့ရသော်လည်း ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကိုတော့ဖြင့် အပျက်မခံနိုင်